Ahoana ny fomba fampidinana horonantsary Instagram amin'ny Android, PC na iPhone | Vaovao momba ny gadget
Nanjary iray amin'ireo endrika be mpampiasa indrindra amin'ny tambajotra sosialy ny horonan-tsary. Isaky ny mahita ny fomba hitrangany azo atao bebe kokoa rehefa mampakatra horonan-tsary amin'ny tambajotra toy ny Instagram, izay manana sehatra video vaovao aza. Ary koa amin'ny tambajotra sosialy hafa toy ny Facebook na Twitter dia manana andraikitra lehibe izy io. Na dia iray amin'ireo olana atrehin'ireo mpampiasa aza ny fomba fampidinana ireo horonan-tsary ireo izay nakarina tao amin'ny tambajotra sosialy.
Vao haingana izahay no nanoro anao ny fomba azonay atao misintona horonantsary Twitter. Ankehitriny dia anjaranao ny manao toy izany amin'ny Instagram. Ny tambajotra sosialy misy sary dia mamela toerana bebe kokoa ho an'ny horonan-tsary, ary mety misy ny iray tianao ary te hanana azy amin'ny solosainao na ny findainao voatahiry ianao.
Tsy manome fitaovana natiora antsika ny Instagram ahafahantsika misintona ireo horonan-tsary ireo ampidirin'ny mpampiasa hafa. Voatery izahay mampiasa fitaovana avy amin'ny antoko fahatelo hahafahana mandray azy ireo. Soa ihany fa nitombo be ny fisafidianana ireo fitaovana ireo rehefa mandeha ny fotoana. Mihamora kokoa noho izany.
Eto no hanazavana ny fomba ahafahantsika misintona ireo horonantsary ireo arakaraka ny fitaovana. Na mampiasa ny tamba-jotra sosialy amin'ny telefaona Android anao ianao, amin'ny kinova desktop na amin'ny fitaovana iOS. Araka izany, azonao atao ny misintona ireo horonan-tsary ireo amin'ny fotoana rehetra tsy misy olana.
1 Sintomy ny horonan-tsary Instagram amin'ny Android
2 Sintomy ny horonan-tsary Instagram amin'ny PC
2.1 Sintomy mivantana
3 Sintomy ny horonan-tsary Instagram amin'ny iPhone
Sintomy ny horonan-tsary Instagram amin'ny Android
Tamin'ny voalohany dia noforonina ho an'ny telefaona finday ny tambajotra sosialy, na dia efa nanana ny kinalan'ny birao efa ela aza izy io. Fa ny ankamaroan'ny mpampiasa mampiasa azy io amin'ny finday avo lenta. Raha manana telefaona Android ianao, dia mahita fomba maro isintomana ireo horonantsary ireo izahay. Ny fomba tsotra indrindra dia ny fampiasana fampiharana. Ao amin'ny Play Store dia manana rindrambaiko marobe izahay izay manome antsika izany fahafaha-manao izany.
Ny safidy tsara indrindra amin'ity lafiny ity dia ny Video Downloader ho an'ny Instagram. Misaotra an'ity fampiharana ity, azontsika alaina maimaim-poana amin'ity rohy ity, azontsika atao ny misintona horonantsary amin'ny telefaona Android izay ampidinin'ny mpampiasa hafa amin'ny tambajotra sosialy. Ary tena tsotra ny fomba fiasa, koa tsy hanana olana amin'izany isika. Raha vao sintomina dia mila miditra ao amin'ny Instagram fotsiny isika.
Eo no tsy maintsy ahitantsika ilay horonantsary izay hitantsika fa mahaliana antsika. Tsindrio avy eo ireo teboka telo mitsangana izay hita eo amin'ny ilany ankavanana ambony amin'ny efijery. Hanana safidy maromaro isika ao anaty menio misy ny toe-javatra, izay anisany mahita ny fahafaha-maka tahaka ny URL izahay an'ny lahatsoratra voalaza. Tsindrio ity safidy ity ary ho adika amin'ny tabilao ny URL. Avy eo, miditra amin'ny rindrambaiko Android izahay.
Ao anatin'ity fampiharana ity, ny zavatra tsy maintsy ataontsika dia apetaho ny URL izay vao nalaintsika. Ny horonantsary izay hitantsika tao amin'ny Instagram ary te-télécharger dia haseho eo amin'ny efijery. Tsy maintsy tsindrio ny kisary fizarana, izay hananantsika ny fahafaha misintona azy avy eo. Tsindrio ity safidy ity dia hanomboka ny fisintomana. Afaka segondra vitsy dia ho hitantsika amin'ny finday Android ity horonantsary ity.
Sintomy ny horonan-tsary Instagram amin'ny PC
Nahazo fanatrehana ny kinova amin'ny birao. Amin'izao fotoana izao isika dia afaka manao hetsika marobe avy amin'izany, mamela antsika hivezivezy eo anelanelan'ny mombamomba ireo kaonty arahinay amin'ny fomba tena milay ireo. Noho izany, mety hahita video isika indraindray. Ary raha mampiasa ny solosaina isika, miaraka amin'ny Google Chrome ho toy ny mpizaha, dia manana safidy maromaro isika.
Misy fika tsotra be izay ahafahantsika misintona ireo horonantsary tsy mila pejy na mametraka extension amin'ny browser. Ny tokony hataontsika dia ampidiro ny piraofilina Instagram misy ilay video mahaliana antsika Etazonia Rehefa eo amin'ny mombamomba antsika isika ary manana ny horonantsary hita dia tsindrio havanana isika, tsy hiditra ao amin'ilay paositra. Safidinay avy eo ny safidy "rohy misokatra amin'ny vakizoro vaovao".
Rehefa manokatra takelaka vaovao isika, dia toy izao ny adiresin'ny horonantsary: https://www.instagram.com/p/Bpw1bBIl775/. Ny hany zavatra tsy maintsy hataontsika dia ny manova kely ny voalaza URL. Mila manampy qq alohan'ny Instagram fotsiny ianao, amin'izay dia afaka mampidina azy io izahay. Ka ny URL dia nanjary: https://www.qqinstagram.com/p/Bpw1bBIl775/. Tonga dia niditra tao amin'ny bara adiresy izahay.
Haharitra kely izany, nefa hitarika a pejy ahafahantsika maka ny horonantsary mivantana. Hipoitra eo amin'ny efijery ny bokotra fampidinana iray, izay no mila tsindrio amin'ity tranga ity. Araka izany, alaina amin'ny alàlan'ny fomba tsotra ny video ao amin'ny solosaintsika.
Google Chrome dia manana fanitarana maro be, noho izany dia azontsika atao ny misintona ireo horonantsary izay hitantsika amin'ny Instagram ao amin'ny solosainay. Noho izany, mila mametraka fotsiny ilay fanitarana isika ary rehefa mahita horonantsary dia mila tsindrio fotsiny ny bokotra fampidinana izay manamora ny fizotrany amin'ny fomba miavaka.
Misy fanitarana tsara izay ahafahantsika misintona karazana atiny rehetra izay nakarina tao amin'ny tambajotra sosialy. Ny fanitarana resahina dia antsoina hoe Downloader for Instagram, azonao sintonina amin'ny Chrome amin'ity rohy ity. Misaotra an'io fa ho afaka maka sary sy horonan-tsary miakatra amin'ny tambajotra sosialy ianao. Tsotra ihany koa ny fiasan'izy io, rehefa apetrakao amin'ny navigateur dia mila miditra tsotra fotsiny amin'ny tamba-jotra sosialy isika.
Rehefa miditra amin'ny piraofilina iray, raha apetrakao amin'ny horonan-tsary na sary ilay sary dia ho hitantsika izay azontsika eo an-tampony ny safidy hisintona. Ka mila tsindrio fotsiny isika eo, mba hahafahantsika maka ilay horonan-tsary na sary mahaliana antsika amin'ny fomba tsotra. Hisintona ho azy ireo amin'ny solosaina izy ireo ary afaka mitahiry na miasa miaraka amin'izy ireo isika. Raha ny horonan-tsary dia alaina amin'ny endrika MP4 foana izy ireo.
Sintomy ny horonan-tsary Instagram amin'ny iPhone
Amin'ny iPhone dia toy izany koa no mitranga amin'ny Android, ny safidy tsara indrindra sy mora indrindra amin'io dia ny fampiasana rindranasa. Ao amin'ny App Store dia mahita safidy maro isika handefasana horonantsary avy amin'ny Instagram, izay mitovy amin'ny asany. Safidy tsara, izay misy naoty mpampiasa tsara, dia Regrammer, azonao sintonina ao amin'ity rohy ity.
Rehefa nametraka azy io tamin'ny iPhone isika dia tsy maintsy mankanesa ao amin'ny Instagram aloha dia tadiavo ny horonantsary mahaliana antsika raha izany dia. Ao amin'ny faritra avaratra ambony amin'ny efijery dia mahazo teboka telo mitsangana isika, izay tokony hoterentsika. Rehefa manao izany dia hiseho ny safidy maromaro, izay ahitantsika ilay maka tahaka ny URL an'ilay horonantsary voalaza. Tsindrio eo io.
Ampidirintsika avy eo ny Regrammer ary ho hitantsika fa misy boaty miseho eo amin'ny efijery. Inona no tsy maintsy ataontsika dia ny mametaka ny url izay vao nadikanay tao aminy. Tsindrio avy eo ny bokotra hijerena raha hijery hoe inona marina ilay horonantsary tianay ho sintonina. Manaraka, tsindrio ny bokotra fizarana ary hahazo safidy maromaro isika. Tsy maintsy mamonjy ny famonjena isika.
Amin'izany fomba izany, ny horonan-tsary dia ho voatahiry amin'ny iPhone. Ka ny fizotry ny fisintomana horonantsary avy amin'ny tamba-jotra sosialy malaza dia tsotra be noho io fampiharana iPhone maimaimpoana io.
Te hanana mpanaraka amin'ny Instagram ve ianao? Jereo ny toro-hevitra tsara indrindra hanaovana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » fampiharana » Ahoana ny fomba fampidinana horonantsary avy amin'ny Instagram
Ahoana ny fampiasana AirDrop amin'ny fitaovana iOS sy macOS
Fanadihadiana ny Amazon Echo Plus vaovao, automatique an-trano miaraka amin'ny herin'ny feo tsara indrindra